Kulan looga hadlaayey Soohdimaha Godollada iyo Degmooyinka dalka oo la qabtay + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Kulankaan oo ay ka qeyba galeen Masuliyiin ka socotey Maamul Gobaleedyada dalka ka jira qabiiro ku xildheeri arimaha soohdimaha Dalka iyo xubnaha gudiga madax banaan ee xaduudaha iyo faderaalka dalka ayaa waxaa looga hadleyay qodob ay kamid yihiin Farsamooyinka lagu xaqiijiniyo sohdimaha ay kale lee yihiin Maamul goboledyada iyo degmooyinka dalka.
Kulnakaaan ayaa intii uu socotey waxaa lagu falanqiiyay sidee loo maareyn lahaa degmooyinka heysta sharciyada ee aan heysan sohdimo caymin dafuuraha xiligaan jiro awgeed..
Xuseen Xaashi Xasan oo xubin ka We’ve got the most cost effective deals for medicines you can find! You can get benfotiamine only for 49.76 USD right away! ah gudiga madax banana ee xaduudaha iyo faderaalka Dalka ayaa sheegay in ujeedad kulanka uu yahay sidee loo dhageysan lahaa talooyinka kaladuwan ay soo gudbiniyaan ka qeyba galaaysha kulanka.
Gudomiyaha Gudiga Madaxabanaan ee Xaduudaha iyo faderaalka Khaliif C/kariin Maxamed oo kulanka kadib la Hadley warbaahinta qaranka ayaa sheegay iney markii la soo dhameeyay latshiyada qeybaha bulshada ay bilaawi doonan howlaha loo xilsaarey ee ku aadan sohdiminta Gobalada iyo degmooyinka dalka.
Gudiga Madax banan ee Xaduudaha iyo Faderaalka ayaa mudooyinkii ugu danbeyay wado ra’yi aroorin ku aadan Arimaha Xaduudaha iyo Faderaalka oo ay la sameynayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay`adaha ay quseyso Arintaas.